Thursday June 13, 2019 - 11:12:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaa booqasho aan horey loo sii shaacin ku yimid taliyaha ciidamada Maraykanka ee qaaradda Africa ninka lagu magacaabo Thomas Waldhauser.
Thomas Waldhauser, oo la tagan ra'iisul wasaaraha dowladda.
Maalintii Talaadada ee aynu soo dhaafnay ayuu Waldhauser kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana kulamo saacado qaatay uu la yeeshey masuuliyiin katirsan dowladda federaalka.
Ra’iisul wasaaraha dowladda Xassan Cali Kheyre ayaa kamid ahaa madaxda uu Waldhauser la kulmay, waxaana kulankaas ku wehlinayay safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto.
War qoraal ah oo lagu baahiyay barta Internetka ay ku leeyihiin taliska Africom ayaa lagu sheegay in kulanka ay yeesheen madaxda Maraykanka iyo ra’iisul wasaaraha dowladda looga hadlay, dagaalka ka dhanka ah Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Labada dhinac waxay isla soo hadal qaadeen awooda sii xoogeysaneysa ee Mujaahidiinta, iyagoona sheegay iney iska kaashan doonaan la dagaalanka iyo kahortaga weerarada ay fuliyaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Xog la helayo waxay ku warameysaa in ra’iisul wasaaraha dowladda uu ku cataabay taliyaha ciidamada Maraykanka ee qaaradda Africa Thomas Waldhauser, isagoona ka codsaday in Maraykanku ka gacan siiyo dagaalka ay dowladiisa kula jirto Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Dadka u dhuun daloola arimaha Soomaaliya, kana faallooda amniga ayaa sheegaya in safarka Thomas Waldhauser ku yimid Muqdisho, saacadahana qaatay loo qariyay cabsi ku aadan inuu la kulmo weeraro ay kusoo qaadaan guutooyinka Naftood hurayaasha iyo amniga ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, kana howlgala magaalada caasimadda ah.
Maraykanka waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan askari oo qeyb ka ah duulaanka lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed, waxaana intaa dheer in diyaaradaha aa duuliyaha lahayn ee uu Maraykanku leeyahay gumaad ka wadaan deegaannada dhaca koonfurta Soomaaliya.
Waxaa ugu dambeysay duqeyn diyaaradeed oo lagu dilay nin dulllaal ka ahaa gawaarida dadweynaha ee ka safra deegaanka Tooratoorow, kaas oo lagu magacaabo Macallin Ibraahim.
Maraykanka ayaa ninkaas ku tilmaamay inuu ahaa xubin muhiim ah oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaase arinkaas si kulul u beeniyay Suldaan Maxa’ed Abuukar Mayow oo ah afhayeenka Odayaasha dhaqanka islaamiga ee wilaayada Shabeellaha hoose.